Semax का शीर्ष7लाभहरू तपाईले प्रयोग गर्नु अघि जान्नु पर्दछ - Phcoker
1। सेमेक्स पेप्टाइड भनेको के हो?
2। सेमेक्स अनुप्रयोग
3। सेमाक्स बेनिफिटहरू
4। सेमेक्सले कसरी काम गर्दछ?
5। मैले सेमेक्स कसरी प्रयोग गर्ने?
6। के त्यहाँ कुनै साइड इफेक्टहरू छन् जब तपाईं सेमेक्स प्रयोग गर्नुहुन्छ?
7। के तपाईंले सेमेक्स स्ट्याक प्रयोग गर्दा?
8। Semax vs Selank बीच के भिन्नताहरू छन्?
9। म Semax अनलाइन कहाँ पाउन सक्छु?
सेमेक्स 1980s र 90s मा विकसित भएको थियो, त्यसपछि स्ट्रोक पीडितहरू, मस्तिष्क क्षति र संज्ञानात्मक गिरावटको उपचारको लागि रूसमा स्वीकृत भयो। को सेमेक्स पेप्टाइड रसियामा विभिन्न मानव अध्ययनको अधीनमा रहेको छ, र यसले संज्ञानात्मक बृद्धि गर्ने गुणहरू भएको प्रमाणित गरेको छ।
अर्कोतर्फ, औषधिले चिन्ता कम गर्नका साथै प्रयोगकर्ताको मुड सुधार गर्न कसरी मद्दत पुर्‍याउँछ भन्ने बारे पर्याप्त दस्तावेज मेडिकल खोजीहरू छन्। सेमेक्स मानक नूट्रोपिकको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, तर यसको अतिरिक्त प्रयोगहरू पनि छ जस्तै मस्तिष्कको स्वास्थ्य बढाउन र अन्य कार्यहरू बीच प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बढावा दिन। सेमाक्स लाभहरू मात्र महसुस गर्न सकिन्छ जब औषधि सही रूपमा लिईन्छ। जे होस्, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले राम्रो परिणाम र अनुभवका लागि तपाईको डाक्टरबाट प्रयोग निर्देशन प्राप्त गर्नुहुन्छ।
सेमेक्स (80714-61-0) एक पेप्टाइड औषधि हो जुन स्ट्रोक जस्ता विकारहरूको उपचार र नियन्त्रणमा मद्दत पुर्‍याउन 1980 मा रूसमा विकसित गरिएको थियो। आज, सेमाक्स चिन्ता रूसीहरूको आवश्यक औषधिहरूको सूचीमा सूचीबद्ध गरिएको छ विभिन्न स्वास्थ्य अवस्थाको उपचारमा यसको प्रभावकारिता प्रमाणित गरेपछि।
डाक्टरहरूले पनि सेमेक्सलाई नूट्रोपिक औषधिको रूपमा सिफारिस गरे पछि कि यसले मेमोरी प्रदर्शन सुधार गर्न र तनाव कम गर्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। रसिया र युक्रेनले यस औषधिको प्रयोगलाई अनुमोदन गरिसकेका भए पनि संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता अन्य देशहरूले यसलाई बिभिन्न स्वास्थ्य अवस्थाको उपचारमा महत्वपूर्ण साबित भए पनि यसलाई स्वीकार्न सकेका छैनन्। जे होस्, त्यसले सेमेक्स पाउडर प्रयोग गर्नबाट तपाईंलाई रोक्दैन।
मानक सेमेक्स पाउडर बाहेक, त्यहाँ बजारमा दुई भिन्नताहरू पनि उपलब्ध छन्, तर तिनीहरू लगभग समान तरिकाले काम गर्दछन्। तिनीहरूमा ना-सेमेक्स-एमिडेट र एन-एसिटिल सामेल छन्। हाल, त्यहाँ कुनै विस्तृत अध्ययन गरिएको छैन जुन दुई Semax संस्करणहरूको बारेमा आयोजित गरिएको वा दस्तावेज गरिएको छ। जहाँसम्म, सेमेक्स समीक्षाबाट, केही प्रयोगकर्ताहरूले रिपोर्ट गरे कि ना-सेमेक्स-एमिडेटे फोकस बढाउनको लागि शक्तिशाली छ जबकि एन-एसिटिल सेमेक्स अधिक ऊर्जावान छ। सेमेक्स परिणामहरू एक व्यक्तिबाट अर्कोमा फरक हुन सक्दछ, शरीरमा खुराकलाई कसरी प्रतिक्रिया गर्दछ भन्नेमा निर्भर रहन्छ। तपाईं कुनै पनि सेमेक्स संस्करणहरू प्रयोग गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ तर यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले सम्पूर्ण डोज प्रक्रियामा आफ्नो डाक्टरलाई संलग्न गर्नुभयो।
यो सेमेक्स पाउडर तपाईंको वरपर विभिन्न अनलाइन र भौतिक स्टोरहरूमा उपलब्ध छ जहाँ तपाईं कुनै पनि समयमा अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। एक भरपर्दो र अनुभवी विक्रेता वा आपूर्तिकर्ताबाट बिक्रीको लागि सेमेक्स पाउनुहोस्। प्रत्येक औषधि विक्रेताले गुणस्तरीय उत्पादनहरू आपूर्ति गर्दैन, र यो सधैं राम्रो विचार हो Semax आपूर्तिकर्ताको अध्ययन गर्नु अघि तपाईंको अर्डर गर्नु भन्दा पहिले। स्टोर कसरी सञ्चालन हुन्छ र कसरी तपाइँ लिनुहुन्छ तपाइँको सेमेक्स (80714-61-0) भन्दा पहिले यो लिनुहोस् बुझ्नुहोस्।
तपाईले यो औषधि लिन सुरु गर्नु अघि मेडिकल जाँचको लागि पनि सल्लाह दिइन्छ। Semax बिक्री को लागी एक निर्धारित औषधि हो, र यसैले, तपाइँको डाक्टर सही व्यक्ति हुनु पर्छ तपाइँ को लागी तपाइँको अवस्था जाँच पछि सही खुराक सेट गर्न को लागी। उपचार प्रक्रिया पनि राम्रो परिणामहरूको लागि स्वास्थ्य पेशेवरले अनुगमन गर्न आवश्यक छ।
सेमेक्स खरीद गर्दा (80714-61-0), यसलाई बच्चाहरू पुग्न र फ्रिजमा टाढा राख्नुहोस् किनकि यसले अन्य पेप्टाइडहरू जस्तै अपमान गर्न सक्दछ। उत्तमको लागि, सेमेक्स अनुभव, तपाइँ सबै खुराक निर्देशनहरूको पालना सुनिश्चित गर्नुहोस्। तपाईंको डाक्टरलाई सूचित नगरी कहिले पनि डोज समायोजित नगर्नुहोस्।
2. सेमेक्स अनुप्रयोग
माथि उल्लेख गरिए अनुसार Semax पेप्टाइड चिकित्सा संसारमा विशेष गरी बिभिन्न अवस्थाको उपचारमा आवश्यक रहेको छ। रसियामा यो औषधि स्ट्रोक जस्ता सर्कुलेशन डिसआर्डरहरू नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्न सक्छ भन्ने अनुभूति पछि स्वीकृत भयो। यद्यपि, वर्षौंको अवधिमा गरिएको सेमेक्स अध्ययनहरूले अन्य रोगहरू पनि पत्ता लगाए जुन औषधि सफलतापूर्वक उपचार गर्न सकिन्छ।
बिभिन्न देश वा चिकित्सकहरु Semax विभिन्न स्वास्थ्य अवस्था को उपचार को लागी प्रयोग गर्दछ। सेमेक्स चिन्ता इंट्रानेस्ली लागू गरिन्छ, तर केवल बूँदहरू भिन्नै छन् उपचार अन्तर्गत स्वास्थ्य अवस्थाको आधारमा। त्यहाँ Injectable Semax फारम मात्र एक स्वास्थ्य पेशेवर द्वारा प्रशासित हुनु पर्छ। सधैं एक फ्रिजमा औषधि भण्डारण गर्न नबिर्सनुहोस्।
3. सेमाक्स बेनिफिटहरू
सेमेक्स एक नोट्रोपिक हो जुन तपाईको दिमागलाई बिभिन्न तरीकाले मद्दत गर्न धेरै उपयोगी छ। सेमेक्स 2011 मा औषधीय प्रयोगको लागि अनुमोदित भएकोले, औषधि विभिन्न स्वास्थ्य अवस्थाहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरियो। जब सही रूपमा लिईन्छ, औषधिले निम्न लाभहरू प्रदान गर्न सक्दछ;
1। एडीएचडी लक्षणहरू सजीलो गर्दछ
सेमेक्ससँग एडीएचडी लक्षणहरूको उपचारमा मद्दत हुने प्रभावहरू छन्। मेडिकल अध्ययनहरूले देखाउँछ कि सेमेक्सले मेमोरीमा सुधार गर्दछ र न्यूरोट्रान्समिटरहरू बढाउँदछ, जुन एडीएचडी भएका व्यक्तिको लागि सामान्यतया कम हुन्छ। हाल, सेमेक्स रूसमा एडीएचडी भएका बच्चाहरूको लागि वैकल्पिक उपचार हो। एडीएचडी एक न्यूरोडेवलपमेन्टल अवस्था हो जसले डोपामाइन स्तर बिघ्न गर्न सक्छ, र सेमेक्स समस्या सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
2। ऑक्सीडेटिव क्षति रोक्दछ
मूल रूपमा, सेमाक्स हृदयघात र स्ट्रोक पीडितहरूलाई मद्दत गर्न डिजाइन गरिएको थियो। वर्षौंको अवधिमा औषधी अक्सिडेटिभ गिरावट नियन्त्रण र रोक्नको लागि उपयोगी छ। ऑक्सीडेटिव क्षति ऑक्सीडेटिव तनावको कारण हुन्छ, जुन तपाईको शरीरमा फ्रि रेडिकल र एन्टिऑक्सिडन्टको असंतुलन हो। शारीरिक व्यायामको परिणामस्वरूप हल्का अक्सिडेटिभ तनाव टिश्यु वृद्धिलाई नियमित गर्न पनि मद्दत पुर्‍याउँछ किनकि यसले एन्टिऑक्सिडन्टको उत्पादनलाई ट्रिगर गर्दछ।
यद्यपि, रोगहरू वा सर्तहरू जस्तै प्रोटिनको क्षति, शरीरको कोशाहरू, र डीएनएको रूपमा हुने अक्सिडेशन तनावले गर्दा। यस अनुसार सेमेक्स अध्ययन, स्ट्रोकको औषधिमा औषधि समावेशीकरणले क्षतिग्रस्त न्यूरोलोजिकल कार्यहरूको दर पुनर्स्थापनामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्‍यो। यो प्रभाव स्ट्रोक पीडितलाई मोटर विकारहरू, सेरेब्रल र फोकलबाट बच्न मद्दत गर्दछ।
3। तनाव कम गर्न मद्दत गर्दछ
तनाव धेरै बिरामीहरू जस्तै बिरामी, निद्राको अभाव, वा शारीरिक चोटको परिणामको रूपमा हुन सक्छ। मानव शरीर फरक छन्, र त्यसैले तिनीहरू पनि फरक तनाव प्रतिक्रिया। उदाहरण को लागी, केहि व्यक्तिको शरीरले कलेजोको इन्जाइमको उत्पादन बढाउँदै तनावमा प्रतिक्रिया गर्दछ। अध्ययनहरूले देखाए डिप्रेसन को लागी Semax चिकित्सा अनुसन्धानको समयमा जनावरहरूलाई प्रशासित गर्दा कलेजोको इन्जाइम उत्पादन घटाइन्छ। अर्कोतर्फ, स्वास्थ्य पेशेवरहरूले भनेका छन् कि सेमेक्सले शारीरिक परिवर्तनलाई सामान्य बनाउँदछ जुन शारीरिक चोटपटक लागी तनावबाट आएको हुन्छ।
4। रक्त परिसंचरण बढाउँछ
स्ट्रोकको लागि सबैभन्दा खतरनाक जोखिम कारक मस्तिष्कमा रक्त संचारको अभाव वा कमजोर रक्तचाप हो, यो अवस्थालाई सेरेब्र्रोवास्कुलर अपर्याप्तता भनेर चिनिन्छ। स्ट्रोकको उपचारमा सेमेक्सको प्रयोगले मस्तिष्कमा रक्त संचार सुधार गरेर सकारात्मक नतिजा पोष्ट गरेको छ। यस औषधिले तपाईंको मुटु बढ्नबाट रोक्नमा पनि प्रभाव पार्छ जब तपाईं उच्च रक्तचाप हुनुहुन्छ। बदलेमा, यसले तपाईंलाई कुनै पनि मुटुको असफलता विकास गर्नबाट बचाउँछ, यदि तपाईं तातो हमलामा भए पनि।
5.Increases ब्रेन-व्युत्पन्न न्यूरोट्रॉपिक कारक (BDNF)
न्यूरन्स बाँच्न, संज्ञानात्मक विकास, र synapses को प्लास्टिकता मा BDNF महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। BDNF न्यून स्तरले डिप्रेसन र चिन्तालाई निम्त्याउन सक्छ वा बिगार्न सक्छ। जति यो तपाइँलाई न्यूनतम साइड इफेक्टमा पर्दाफास गर्दछ, सेमेक्स पनि उत्कृष्ट BDFN बढाउने र एक एन्टिडप्रेससन्ट साबित भएको छ। औषधिले BDNF उत्पादनलाई 800% सम्म खरिद गर्न सुधार गर्न सक्दछ।
बढ्दो BDNF उत्पादन मार्फत, सेमेक्सले चिन्ता र उदासीनलाई नियन्त्रण गर्न र मद्दत गर्न मद्दत गर्दछ। एन्टीडिप्रेससन्ट मेडिकल अध्ययनहरूले प्रमाणित गर्‍यो कि कसरी उच्च BDNF स्तरहरूले डिप्रेसन कम गर्नमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। सेमेक्स लेम्बिक प्रणाली रिसेप्टर्सहरूलाई उत्तेजित गर्दछ एडेनोसिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, र हिस्टामाइन उत्पादन गर्न, जसले ईजीमा मद्दत गर्दछ
एडीएच, चिन्ता, र डिप्रेसनसँग सम्बन्धित एनजी लक्षणहरू। यी सबै न्यूरोट्रान्समिटरहरूको बृद्धिले उत्प्रेरणालाई बढावा दिन्छ, यसैले फोकस र उत्पादकता बढाउँदछ।
6। सेमाक्सले पीडा कम गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ
जब तपाईं केही दुखाइ अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईंको मस्तिष्कले बारम्बार ईन्केफालिन्स भनेर चिनिने न्यूरोट्रान्समिटरहरू रिलीज गर्दछ, जसले पीडा संवेदनालाई कम पार्छ। यसले दुखाइ परिवर्तनलाई पनि असर गर्दछ जुन आतंककारी भावनाहरूलाई कम हुन्छ जब तपाईं दु: खमा हुनुहुन्छ।
एन्केफાલिनले केवल केहि समयको लागि शरीरको दर्दलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ; त्यसकारण, सेमाक्सले यसको ब्रेकडाउन रोक्नका साथै उत्पादन बढाउँदै मद्दत गर्दछ। यसैले तपाईको शरीरमा लामो समयसम्म दुखाइको तीव्रता कम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ र त्यसले सेमेक्सलाई शक्तिशाली पीडा कम गर्दछ।
7। सेमेक्स मेमोरी रिटेन्सन सुधार गर्दछ
एनकेफिलिनजस्ता न्यूरो ट्रान्समिटरहरूले धारणामा प्रभाव पार्छ, र जब वृद्धि हुन्छ, ती सम्झनाहरू सिर्जना गर्न र मुड नियन्त्रण गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन्। रसियामा सञ्चालन गरिएको चिकित्सा अनुसन्धान, राम्रो स्वास्थ्य भएका श्रमिकहरूमा, सेमेक्स पाउडर तिनीहरूको ध्यान र स्मृति प्रतिधारण वृद्धि। वैज्ञानिक अध्ययनहरूले सुझाव दिन्छ कि मानव मस्तिष्कमा उचित रक्त परिसंचरण र ऑक्सीडेटिव संरक्षणको प्रबर्धनले मेमोरीमा वृद्धि गर्दछ।
हिप्पोक्याम्पसमा बीडीएनएफ स्तरमा भएको वृद्धि मेमोरी सुधार गर्न पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ किनकि हिप्पोक्याम्पस भावना र मेमोरीको लागि मस्तिष्कको केन्द्र हो। अर्कोतर्फ, BDNF ले रिकल, मेमोरी, र नयाँ जानकारी सिक्न र कायम राख्न क्षमता वृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ। बीडीएनएफ न्यूरोजेनेसिसको उत्पादनलाई उत्तेजित गर्दछ, जुन मस्तिष्कमा स्नायु मार्गहरूको एक पुस्ता हो जसले मस्तिष्कको कार्य र प्रसंस्करण सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
4. सेमेक्सले कसरी काम गर्दछ?
सेमाक्स एक शक्तिशाली नूट्रोपिक र औषधी हो जब विभिन्न स्वास्थ्य स्थितिको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। एकचोटि यो तपाईंको शरीर प्रणालीमा जान्छ, सेमेक्स दिमाग-व्युत्पन्न न्यूरोट्रपिक कारक (BDNF) स्तर र प्रभावकारिता पनि बढाउँदछ।
वैज्ञानिक रूपमा, BDNF प्रोटीन हो जसले समग्र मस्तिष्क स्वास्थ्यलाई बढावा दिन्छन् तपाईंको मस्तिष्क कोशिकाको रक्षा र सुदृढीकरण गरेर, मस्तिष्क कोशिकाहरूको विकासलाई बढावा दिन्छ, र समग्र मस्तिष्कको विकृतिलाई बढावा दिन्छ। सामान्यतया, कुनै पनि Nootropic जसले BDNF स्तर बढाउँदछ धेरै प्रयोगकर्ताहरूमा अनुभूति बढाउँदछ, र Semax एक शक्तिशाली BDNF सुदृढीकरण पूरकको एक उत्कृष्ट उदाहरण साबित भएको छ।
केहि केसहरूमा सेमेक्स स्ट्याक मुडलाई बढाउन र आरामदायी औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। त्यो किनभने यसले तपाईंको शरीरमा डोपामाइन र सेरोटोनिन गतिविधिहरू पनि बढाउँदछ, जुन न्युरोट्रान्समिटरहरू हुन् जुन चिन्ता र उदासीनतामा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्दछ। धेरै बर्षमा, चिकित्सकहरूले सेमाक्सले सम्बोधन गर्न सक्ने विभिन्न स्वास्थ्य अवस्थाहरू पत्ता लगाउन जारी राखेका छन।
5. मैले सेमेक्स कसरी प्रयोग गर्ने?
सेमेक्स डोज उपचार अन्तर्गत स्वास्थ्य अवस्थामा निर्भर गर्दछ, र खुराक एक मेडिकल पेशेवर द्वारा सेट गर्नुपर्छ। सिफारिस गरिएको सेमेक्स खुराक 300mcg बाट 600mcg मा दायराहरू। यद्यपि नयाँ प्रयोगकर्ताहरूलाई कम खुराकका साथ सुरु गर्न सल्लाह दिइन्छ जुन ड्रगमा तपाईंको शरीरको प्रतिक्रियाको निगरानी पछि डाक्टरले पछि समायोजित गर्न सक्दछन्।
ड्रग्सको साथ, कसैले पनि सुरूको लागि उच्च खुराक लिने जोखिम लिनु हुँदैन किनभने यसले गम्भीर साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ। Semax कपाल झर्ने जस्ता यस औषधिसँग सम्बन्धित कुनै पनि जोखिमबाट बच्न यो कुनै पनि कारणको लागि यस औषधि लिनु अघि मेडिकल परीक्षणको लागि जानु राम्रो हुन्छ।
सेमाक्स अधिकांशतः इन्ट्रानेसली लिईन्छ, र तपाइँले2वा3सानो ड्रपहरू हरेक नाकमा दुई वा तीन पटक तपाइँको डाक्टरले सेट गरेको चक्रको लागि लिनु पर्छ। केहि सर्तहरू जस्तै जब उपचार पछि रिकभरी अवधिको लागि Semax लिँदा, तपाईले4बूँदहरू प्रत्येक नाकमा लिनुपर्दछ, दिनको छ पटक। पोस्ट नार्कोसिस मेमोरी वा ध्यान विकारको लागि, सिफारिश गरिएको खुराक3प्रत्येक नाकमा दिनमा तीन पटक ड्रप हुन्छ। डिप्रेसन2बाट3को Semax प्रत्येक नाकमा ड्रप गर्दछ, दिनमा तीन पटक सिफारिस गरिएको खुराक हो।
आदर्श रूपमा, यो सेमेक्स ईन्जेक्शन खुराक उपचार अन्तर्गत स्वास्थ्य अवस्था मा निर्भर गर्दछ। जे होस्, डाक्टरको डोज निर्देशनहरूमा टाँसिनुहोस् किनकि निर्माता सिफारिसले तपाईंलाई काम नगर्न सक्छ। केहि प्रयोगकर्ताहरूले कम खुराक लिइसकेपछि गुणस्तरीय नतिजा प्राप्त गर्न सक्दछन्, जबकि अरूले चाहिँ प्रभाव लिन उच्च डोज लिन पर्ने हुन्छ। यो सामान्य घटना हो किनकि मानव शरीरको शक्ति एक व्यक्तिदेखि अर्कोमा फरक हुन्छ।
a) सेमेक्स इंजेक्शन
सेमाक्स पनि एक इन्जेक्शन मार्फत प्रशासित गर्न सकिन्छ, जो नाक स्प्रेसँग असहज प्रयोगकर्ताहरूका लागि उत्तम खुराक हुन सक्छ। दुबै सेमेक्स नेजल स्प्रे र सबकुटेनियस इन्जेक्शन फारमहरू यस्तै उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिन्छ कि उनीहरूको अनुप्रयोगमा फरक छ।
तपाईंको डाक्टरले तपाईंलाई दुबै बीच एक डोज फारम छनौट गर्न अनुरोध गर्न सक्छ। सामान्यतया, कुनै पनि अन्य सेमेक्स फारमको तुलनामा इंजेक्शन खुराकहरू बलियो हुन्छ। त्यसोभए तपाईंले दिनहुँ दुई वा तीन चोटि दिन वा त्यसभन्दा बढी लिनु पर्ने नाकको थोपाहरूको जस्तो इन्जेक्सन पनि नियमित लिनुपर्दैन।
b) सेमेक्स इंजेक्शन खुराक
धेरै भन्दा धेरै सेमेक्स ईन्जेक्शन नाक को खुराक को लागी एक उत्कृष्ट विकल्प प्रदान गर्दछ, सँधै यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले आफ्नो डाक्टरबाट इंजेक्सनहरू पाउनुभयो। बिभिन्न अवस्थाले बिभिन्न खुराक को लागी कल गर्दछ। एक चिकित्सा परीक्षण पनि तपाइँको लागी सही खुराक सेट गर्न को लागी तपाइँको चिकित्सा मार्गदर्शन गर्दछ। सेमेक्स खुराक 300mcg बाट 600mcg बीचमा हुनुपर्दछ।
खुराक तपाईंको शरीरले पहिलो सेमेक्स ईन्जेक्शन डोजोरलाई माथितिर माथि समायोजित कसरी प्रतिक्रिया गर्दछ त्यसमा निर्भर गर्दै कम गर्न सकिन्छ। यदि तपाईं आफैले ईन्जेक्सनको बारेमा निश्चित हुनुहुन्न भने, तपाईं आफ्नो चिकित्सकलाई प्रशिक्षण दिन वा तपाईंको खुराक लिन नियमित भ्रमणहरूको लागि समय तालिका बनाउन सक्नुहुन्छ। आफैलाई इंजेक्सन जोखिम नगर्नुहोस् यदि तपाईंलाई यो कसरी गर्ने भन्ने बारे थाहा छैन भने यसले अन्य चिकित्सा जटिलता निम्त्याउन सक्छ।
6. के त्यहाँ कुनै साइड इफेक्टहरू छन् जब तपाईं सेमेक्स प्रयोग गर्नुहुन्छ?
सेमाक्स संयुक्त राज्य अमेरिकामा लोकप्रिय औषधी होईन किनकि एफडीएले यसलाई स्वीकृत गरेको छैन किनकि यो विकास भएको हो। यद्यपि रूसमा धेरै अनुसन्धान र परीक्षणहरू भइसकेका छन् जसले सेमेक्स प्रभावकारिता प्रमाणित गर्छन्।
औषधिले मानिसमा बिभिन्न मेडिकल प्रयोगहरुमा देखाइएको छ र लगभग सबै परीक्षणहरुमा सेम्याक्सको कुनै गम्भीर असर हुने छैन। त्यो सेम्याक्सलाई आज बजारमा सुरक्षित nootropic बनाउँछ। रसियामा, सेमेक्स विभिन्न चिकित्सा अवस्था जस्तै माइग्रेन टाउको दुख्ने, स्ट्रोक, र संज्ञानात्मक विकारहरूको उपचारमा उपयोगी भएको छ।
यस औषधिको सब भन्दा आश्चर्यजनक पक्ष यो हो कि यससँग उच्च शक्ति छ, तर जब अत्यधिक मात्रामा लिइन्छ, तपाईंको शरीरमा विषाक्त नहुन सक्छ। यद्यपि रसिया बाहिरका धेरै व्यक्तिहरूले सेमेक्सलाई हालसालै प्रयोग गरेन जब सम्म युक्रेनले यसको प्रयोग स्वीकृत गरिसकेको छैन। तपाईंको शरीर सहिष्णुता स्तर पनि निर्धारित गर्न सक्दछ, Semax परिणामहरू जुन तपाईं औषधि लिने पछि पाउनुहुनेछ।
केहि सेमेक्स साइड इफेक्टहरू केहि सेमेक्स प्रयोगकर्ताहरू द्वारा रिपोर्ट गरिएको छ: जस्तै सुक्खा मुख, बढ्दो पसिना, मतली, र तन्द्रा। सेमाक्स र कपाल झर्नु पनि केही सेमक्स प्रयोगकर्ताहरू द्वारा रिपोर्ट गरिएको अर्को साधारण साइड इफेक्ट हो। यी सबै साइड इफेक्टहरू विरलै रिपोर्ट गरिन्छ, तर चिकित्सकहरूले तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्दछन्। मानव निकाय बिभिन्न छन्, र यदि तपाईंले कुनै अन्य गम्भीर सेमेक्स साइड इफेक्ट अनुभव गर्नुभयो भने डाक्टरलाई सहयोगको लागि तुरुन्त सूचित गर्नुहोस्।
7. के तपाईंले सेमेक्स स्ट्याक प्रयोग गर्दा?
सामान्यतया, सेमेक्सले गुणस्तर परिणामहरू वितरण गर्दछ जब विभिन्न स्वास्थ्य स्थितिको उपचारको लागि एक्लो प्रयोग गरिन्छ। यद्यपि, धेरै नूट्रोपिक्स जस्तै, तपाईं सेमक्स अधिकतम प्रभावकारिता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं यसलाई स्ट्याकमा लिनुहुन्छ। Kratom, जो एक शामक र उत्तेजकको रूपमा प्रयोग गरिएको बजारमा अर्को प्रख्यात nootropic पनि हो, Semax सँग उत्कृष्ट स्ट्याकिंग बनाउँछ। अधिक सेमेक्स उपयोगकर्ता लाई आराम र उत्साहित गर्न सक्दछ, यो Kratom संग लिँदा इच्छित प्रभाव बढाउँछ।
यो Phenylpiracetam संग Semax स्ट्याकिंग विचार गर्न को लागी विचार गर्न उचित छ कारण एक ऊर्जा उत्तेजनाको कारण यो औषधी एक उत्तेजकको साथ ले हुन सक्छ। Phenylpiracetam एक उत्कृष्ट अनुभूति-बढावा nootropic हो तर बिस्तारै कार्य गर्दछ। अर्कोतर्फ, धेरै प्रयोगकर्ताहरूले महत्वपूर्ण सेमेक्स लाभहरू प्राप्त गर्ने रिपोर्ट गरेका छन् जब तिनीहरूले यसलाई अन्य उत्तेजकहरूसँग मिसाउँदछन् जस्तै कर्क्युमिन जसले शरीरमा लामो समयसम्म स्थिर ऊर्जाको अनुमति दिन्छ।
सेमाक्स प्रयोगकर्ताहरूको लागि जसले बढ्दो चिन्ता अनुभव गरेका छनौटहरूले अश्वगन्धासँग औषधिलाई जोड्न विचार गर्नुपर्दछ, जसले आराम गर्ने काम गर्दछ। अश्वगन्ध एक शक्तिशाली छ Nootropic जसले सेमेक्स सम्भावित चिन्ता स्पाइकलाई शान्त पार्न मद्दत गर्दछ।
सबैमा, सेमेक्स अपेक्षित नतीजाहरु लाई अधिकतम बनाउन विभिन्न नूट्रोपिक्स संग स्ट्याक गर्न सकिन्छ। जहाँसम्म, तपाई कुन Nootropic Semax को साथ जोड्ने बारे निश्चित हुनुहुन्न भने, सधैं आफ्नो डाक्टर संग परामर्श गर्नुहोस्। गलत स्ट्याकिंग तपाईंको स्वास्थ्यको लागि धेरै जोखिमपूर्ण छ किनकि यसले गम्भीर साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ।
8. Semax vs Selank बीच के भिन्नताहरू छन्?
सेमाक्स र सेलान्क रसियामा विकसित सबै नूट्रोपिक्स हुन्, र कहिलेकाँही तिनीहरू स्वास्थ्य समस्याहरू जस्तै समायोजन विकार र चिन्ताको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। अधिकतम परिणामको लागि, दुई औषधिहरू सँगै प्रयोग गर्न सकिन्छ। सेलान्क एक एनिसियोलिटिक पेप्टाइड हो जसले तनावको गम्भीर प्रभावहरूलाई न्यूनतम पार्छ र सेमाक्स जस्तो कुनै गम्भीर साइड इफेक्ट नलगाउनका लागि परिचित छ।
संरचनात्मक रूपमा, सेलान्क अन्तर्जात टेट्रापेप्टाइड टुफटसिनबाट आएको हो, जसले तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। सेलान्क प्रभावलाई लामो बनाउन र पेप्टाइड बिग्रनलाई सुस्त बनाउन, उत्पादकहरूले ग्लाइप्रोलिनलाई यसको संरचनामा समावेश गरे।
मस्तिष्कमा Selank कार्य को मोड पनि धेरै अद्वितीय छ; यसले एन्टी-एस्टेनिक र एन्टीडिप्रेससेंट सप्लीमेन्टको साथ एन्टी-फिक्स्ड ड्रगको रूपमा काम गर्दछ जसले संज्ञानात्मक र मेमोरी गतिविधिहरूलाई बढाउछ। तसर्थ, सेमेक्स vs Selank बहस गर्न सकिने हुन सक्छ, तर दुबै औषधि उत्कृष्ट संज्ञानात्मक वृद्धिकर्ता हुन्। Selank इंट्रानेस्ली प्रशासित छ, र खुराक औषधी मुनि शर्तमा फरक पर्न सक्छ।
ती दुई औषधिहरू बिभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरूको उपचारको लागि कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्नेमा फरक छ। सेमाक्स अनुभूति र उदासीनतामा सुधार गर्न बढी सामर्थ्यवान छ, जबकि सेलान्कले गुणस्तरको नतिजा प्रदान गर्दछ जब एक एंटी-फिक्स्टीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। जे होस्, दुबै औषधिहरूले BDNF स्तर बढाउँछन्, र कहिलेकाँही तिनीहरू सँगै स्ट्याक गर्न सकिन्छ, जसरी माथि भनिएँ। Semax बनाम Selank को बारे मा अधिक जानकारी को लागी एक चिकित्सा पेशेवर संग परामर्श।
9. म Semax अनलाइन कहाँ पाउन सक्छु?
यदि तपाईं रसियामा हुनुहुन्छ भने सेमेक्स डाक्टरको प्रिस्क्रिप्शनमा बेचिन्छ। यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिकामा ड्रग कम रेगुलेट गरिएको छ, यद्यपि एफडीएले यसलाई स्वीकृत गरेको छैन। यसको मतलब तपाईं अनलाइन नूट्रोपिक स्टोरहरू मार्फत यसलाई पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। हामी जहिले सेमेक्स प्रयोगकर्ताहरुलाई एकदम सावधान रहन र उत्तम समय सेमेक्स आपूर्तिकर्ता लिनको लागि तिनीहरूको समय लिन सल्लाह दिन्छौं। तपाइँको अनुसन्धान गर्नुहोस्, ग्राहकहरूको समीक्षा जाँच गर्नुहोस् कसरी Semax आपूर्तिकर्ता तपाइँको अर्डर गर्नु अघि संचालन गर्दछ। याद गर्नुहोस्, प्रत्येक सेमाक्स विक्रेता तपाईलाई मार्केटमा फेला पार्न सकिन्न।
राम्रो समाचार यो हो कि हामी यस क्षेत्रमा अग्रणी सेमेक्स आपूर्तिकर्ता हौं। तपाईं हाम्रो वेबसाइट मा आफ्नो अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र संभव छोटो समय भित्र आफ्नो उत्पादन प्राप्त गर्न निश्चित गर्नुहोस्। Semax बिक्री को लागी र Semax स्ट्याक सबै हाम्रो उपयोगकर्ता को अनुकूल अनलाइन स्टोर मा उपलब्ध छन्।
हामी हेरचाह गर्दैछौं सेमेक्स पाउडर आपूर्तिकर्ता, र यसैले हामी हाम्रा सबै सम्मानजनक ग्राहकहरुलाई चिकित्सा परीक्षण बिना वा सम्पूर्ण खुराक चक्रमा एक मेडिकल पेशेवर संलग्न नगरीकनै लागूऔषध सेवन नगर्न चेतावनी दिन्छौं। साथै, तपाईको डाक्टरलाई सूचित गर्नुहोस् तुरून्त तपाईले कुनै गम्भीर साइड इफेक्ट पनि अनुभव गर्नुहुन्छ।
डोलोटोभ, OV, Eremin, KO, Andreeva, LA, Novosadova, EV, Raevskii, KS, Myasoedov, NF, र Grivennikov, IA (2015)। सेमेक्सले एक्सएनयूएमएक्स-हाइड्रोक्सीडोपमाइन-प्रेरित न्यूरोटोक्सिसिटीको एक मोडलमा भ्रुण चूहा मेसेन्सेफेलनबाट व्युत्पन्न मिश्रित न्युरोग्लियल सेल संस्कृतिमा टायरोसिन हाइड्रोक्लेज-पॉजिटिव न्यूरन्सको मृत्यु रोक्दछ। न्यूरोकेमिकल जर्नल, 9(4), 295-298।
कोरोलेभा, SV, र Myasoedov, NF (2018)। सेमेक्स थेरापी र अनुसन्धानका लागि एक युनिभर्सल ड्रगको रूपमा। जीवविज्ञान बुलेटिन, 45(6), 589-600।
मान्चेन्को, डीएम, ग्लाजोभा, एन।, लेविट्स्काइया, NG, Andreeva, LA, Kamenskiĭ, AA, र Miaoedov, NF (2010)। Nootropic र एनाल्जेसिक प्रभाव Semax को प्रशासनका विभिन्न मार्गहरूको अनुसरण गर्दछ। Rossiiskii fiziologicheskii zhurnal imeni IM Sechenova, 96(10), 1014-1023।
मालिशेभ, एभी, रजुमकिना, ईभी, डुबिनिन, VA, र Myasoedov, NF (2013, मे)। सेमेक्सले भेलप्रोइक एसिडको जन्मपूर्व परिचयको कारण मस्तिष्कको डिसफंक्शनलाई सुधार गर्दछ। मा Doklady जैविक विज्ञान (भोलि। 450, न। 1, p। 126) Springer विज्ञान र व्यापार मीडिया।